Tamin’ny Fotoana Nety Ilay Fampisehoana | Fantaro ny Tantarantsika
Inona avy ny Lovantsika Ara-panahy?
Mankasitraka ny Lovantsika Ara-panahy ve Ianao?
Nandre ny Vaovao Tsara ny Mpiambina ny Mpanjaka
Mijanòna eo Amin’ilay Lohasaha Nataon’i Jehovah Hiarovana Antsika
Mitandrema fa Mamitaka ny Fo
Aza Avela Hisy Hisakana Anao Tsy Hahazo Voninahitra Amin’i Jehovah
Havan’i Kaiafa Izy
FANTARO NY TANTARANTSIKA Tonga Tamin’ny Fotoana Nety Ilay Fampisehoana An-tsary
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Febroary 2013
Tonga Tamin’ny Fotoana Nety Ilay Fampisehoana An-tsary
TONGA tamin’ny fotoana nety ilay fampisehoana an-tsary hoe “Fampisehoana Momba ny Famoronana.” Maro no nilaza fa tsy hadinony mihitsy izy io. Nahazo voninahitra tokoa i Jehovah rehefa nalefa izy io, taloha kelin’ny nanenjehan’ny fitondran’i Hitler ny mpanompon’i Jehovah. Fa inona ny “Fampisehoana Momba ny Famoronana”?
Avy tamin’ilay boky hoe Famoronana (alemà) ny anaran’ilay fampisehoana an-tsary vaovao
Namoaka an’ilay hoe “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana” ny foibe tany Brooklyn, any Etazonia, tamin’ny 1914. Olona an-tapitrisany maneran-tany no nahita an’io fampisehoana adiny valo io, izay fitambarana sary mihetsika sy tsy mihetsika, ary miloko sady misy feo. Nivoaka tamin’ny 1914 koa ny fanafohezana azy io, izay nantsoina hoe “Zava-baovao.” Mampalahelo fa simba ny horonan-tsary sy ny fitaovana fandefasana azy, tamin’ny 1920 tany ho any. Be dia be anefa ny olona te hahita an’ilay “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana.” Nisy nilaza, ohatra, tany Ludwigsburg, any Alemaina, hoe: “Rahoviana indray no halefa ny ‘Fampisehoana An-tsary ny Famoronana’?”
Vokatr’izany, dia nividy fitaovana tamina masoivohom-baovao tany Paris, any Frantsa, ny Betelan’i Alemaina. Nividy sary tamina orinasa mpanao sary tany Leipzig sy Dresde, any Alemaina, koa izy ireo. Ireo rehetra ireo avy eo no natambatra tamin’izay sary tsy simba tamin’ilay “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana”, ka nanamboarana fampisehoana an-tsary vaovao.
Namorona feon-kira alefa amin’izy io ny Rahalahy Erich Frost, izay nanan-talenta tamin’ny mozika. Nalaina tao amin’ny boky Famoronana koa ny tantara sasany ao amin’izy io, ka izany no niantsoana azy io hoe “Fampisehoana Momba ny Famoronana.”
Naharitra adiny valo toy ilay “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana” ihany izy io. Nozarazaraina ho ampahany maromaro izy io, ary naseho isaky ny hariva ny ampahany tsirairay. Naseho tamin’izy io ny tsipiriany momba ny andro famoronana tsirairay, ny tantara ao amin’ny Baiboly, ny zava-nitranga resahin’ny tantara, ary ny hoe namitaka ny olona ny fivavahan-diso. Nalefa tany Alemaina, Aotrisy, Luxembourg, Soisa, ary tany amin’ny tany hafa mampiasa teny alemà io fampisehoana an-tsary vaovao io.
I Erich Frost sy ny naotin’ny mozika ho an’ilay “Fampisehoana Momba ny Famoronana”
Hoy i Erich Frost: “Nampirisika an’ireo mpiara-miasa tamiko aho nandritra ilay fampisehoana, indrindra fa ireo nitendry zavamaneno, mba hanararaotra ny fiatoana mba hizarana an’ireo boky sy bokikelintsika tamin’ny mpanatrika. Betsaka kokoa ny boky voapetrakay tamin’izany noho ny rehefa nitory isan-trano.” Nandefa an’ilay fampisehoana an-tsary tany Polonina sy tany amin’ny Repoblika Tseky i Johannes Rauthe, ary tsaroany hoe maro ny mpanatrika nanome ny adiresiny mba hotsidihina. Nisy vokany tsara ny fitsidihana an’ireny olona ireny.
Feno hipoka foana ny toerana nandefasana an’ilay “Fampisehoana Momba ny Famoronana”, ary ny Vavolombelon’i Jehovah no lasa ambentin-dresaky ny olona. Olona efa ho iray tapitrisa no nahita an’ilay izy tany Alemaina, rehefa tonga ny 1933. Hoy i Käthe Krauss: “Nandeha an-tongotra 10 kilaometatra nandroso sy 10 kilaometatra niverina izahay isan’andro, nandritra ny dimy andro, mba hijerena an’ilay fampisehoana an-tsary. Namakivaky ala izahay tamin’izany, sady nianika tendrombohitra sy havoana.” Hoy koa i Else Billharz: “Nanampy ahy ho tia ny fahamarinana ilay ‘Fampisehoana Momba ny Famoronana.’ ”
Nijery azy io ny renin’i Alfred Almendinger ary nahafinaritra be azy ilay izy. Nilaza i Almendinger fa “nividy Baiboly mihitsy ny reniny ary nitady an’ilay teny hoe ‘afofandiovana.’ ” Tsy hitany tao ilay izy, ka tsy nandeha niangona intsony izy, ary natao batisa. Hoy i Erich Frost: “Maro be ny olona nanaiky ny fahamarinana noho ilay ‘Fampisehoana Momba ny Famoronana.’ ”
Nihanahazo vahana tany Eoropa ny Nazia, tamin’ny fotoana nampahalaza ny “Fampisehoana Momba ny Famoronana.” Voarara ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Alemaina, teo am-piandohan’ny 1933. Nenjehina mafy koa ny tany Eoropa taorian’izay, mandra-pahatapitry ny Ady Lehibe II tamin’ny 1945. Nalefa tany amin’ny toby fitanana nandritra ny valo taona teo ho eo i Erich Frost. Tafavoaka velona anefa izy, ary nanompo tao amin’ny Betela tany Wiesbaden, any Alemaina, tatỳ aoriana. Tonga tamin’ny fotoana nety tokoa ilay “Fampisehoana Momba ny Famoronana.” Nanampy Kristianina maro izy io mba ho be herim-po nandritra ireo fitsapam-pinoana tamin’ny Ady Lehibe II.—Avy any amin’ny tahirintsika any Alemaina.
Feno 100 taona amin’ity taona ity ny nivoahan’ny “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana”, izay nanampy ny olona mba hino fa Tenin’Andriamanitra ny Baiboly.
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Febroary 2013
Nahatonga ny Vaovao Tsara Hiely Tany Irlandy ny Lahateny
“Rahoviana Indray no Misy Fivoriambe E?”
‘Lasa Be Zotom-po sy Be Fitiavana Tsy Nisy Hoatr’izany’
“Na Ratsy ny Lalana na Lavitra Be”